Ukuhamba Ngezikebhe - Amathiphu Wokuhlela Uhambo Oluhamba phambili | Izindaba Zokuhamba
USusana godoy | 23/09/2021 18:27 | Cruceros
Uma usuvele ucabanga ngohambo lokuhamba ngomkhumbi, ke yisikhathi esihle sokwenza ukuhlela okuthile iphelele. Ngeke sikhohlwe lutho! Kepha hhayi ukukhuluma ngemithwalo kuphela kepha ngenhlangano enhle yokuthi konke kuboshwe kahle futhi lokhu kuqala ngaphambi kwesikhathi kunalokho esicabanga.
Siyazi ukuthi kuzoba ngumzuzu oyingqayizivele, izinsuku ezingenakulibaleka, futhi ukuze unqamule kukho konke lokhu, kuyalulekwa ukulandela uchungechunge lwezinyathelo. Ukuhlela uhambo lokuhamba ngesikebhe kuyinto ethokozisa kakhulu Futhi njengoba singafuni ukuthi ushiye konke kuze kube umzuzu wokugcina, sikweluleka kuphela ukuthi uthole isimanga esinakho ngawe.
1 Khetha enye yezindawo ezidume kakhulu
2 Ungalindi kuze kube umzuzu wokugcina ukuze wenze ukubhuka
3 Iyiphi ikhabhathi okufanele ngiyikhethe
4 Yini yebo nokuthi yini okungafanele ngiyiphathe esikhwameni sami
Khetha enye yezindawo ezidume kakhulu
Mhlawumbe usuvele unayo indawo ethile engqondweni, ngoba kuliqiniso ukuthi uma sicabanga ngohambo lokuhamba ngomkhumbi kungaba njalo. Kepha uma kungenjalo, kufanele futhi ucabangele lezo ezidingeka kakhulu, ukuze ungapheli endaweni yakho. Ukuhamba ngesikebhe kweMedithera kungenye yezindlela ezinhle kakhulu. Kungani? Yebo, ngoba isinikeza okungaphezu kwamathafa angenakulibaleka. I- Isikebhe saseGrisi ukumema ukuthi uthole zonke iziqhingi ezigcwele izinganekwane nezikhumbuzo okufanele uzibonele mathupha, okungenani kanye empilweni yakho.
Ngakolunye uhlangothi I-Athene, ngeKrethe, iMykonos noma iSantorini. Ngokubalula nje siyazi ukuthi sizoba nenhlanganisela ekhetheke kakhulu yamasiko namabhishi emhlabeni. Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, futhi ukuhamba ngomkhumbi odabula iCaribbean kungenye yezindlela ezingafunwa ngaphandle kokunganaki inyakatho yeYurophu esivumela ukuthi sijabulele iNorway, iSt.Petersburg iye eStockholm noma eCopenhagen. Ukuhamba ngamachweba noma izihloko zeBaltic nakho kufanelekile ohambweni lwethu lokuhamba ngomkhumbi!
Ungalindi kuze kube umzuzu wokugcina ukuze wenze ukubhuka
Akusilo uhambo esingalwenza ngesikhathi esifushane, okuphambene nalokho. Into enhle ukuzama ukuyihlela kusengaphambili futhi uma kuyiphupho lethu, ngeke sisakwazi ukukubambezela. Kungakho singeke sikunikeze isikhathi esilinganayo kodwa esilinganiselwayo: Unyaka kusengaphambili yiso esifanele kakhulu, yize kuliqiniso ukuthi kwesinye isikhathi singakwenza kuze kube yiminyaka emibili ngaphambili. Uma kubonakala kukhulu kakhulu, khumbula lokho Phakathi kwezinzuzo zokwenza ukubhuka kusenesikhathi ukukwazi ukukhetha izinhlobo zezindawo zokuhamba kanye nohambo lwazo, ukutholakala kwezinsuku noma amakamelo amakhulu kakhulu, ngoba imvamisa yibo ababekiwe ngaphambili. Ngaphandle kokukhohlwa ukuthi ungasebenzisa ngokunenzuzo ukukhushulwa okuthile uma wenza ukubhuka kwakho ngokushesha okukhulu. I- izikebhe 2022 isiyatholakala kuwe!
Iyiphi ikhabhathi okufanele ngiyikhethe
Ngomunye wemibuzo efunwa kakhulu futhi ngaphezu kwakho konke, kufanele kuthiwe ulayini wokuhamba lapho uzohamba khona ungahlala ukweluleka ngokuya ngohlobo lwesikebhe. Noma kunjalo sizokutshela lokho Uma ungakaze ube ngesikebhe, kungcono ukukhetha ikhabhathi elisenkabeni maphakathi nasemphemeni engezansi. Okudlula noma yini ngoba kungenye yezindawo lapho ukuhamba kwesikebhe kungabonakali kakhulu futhi lokhu kuzosivimba ukuthi singabi nesiyezi. Kunconywa ikhabini elisengxenyeni engezansi lapho uzobe ukulo kuphela futhi ngokwanele. Ngokuphambene nalokho, uma ucabanga ukuthi ungachitha isikhathi esiningi kukho ukuphumula, bese uzama ukukugcina kude nezindawo lapho abantu abaningi bebuthana khona.
Yini yebo nokuthi yini okungafanele ngiyiphathe esikhwameni sami
Ukupakisha kungenye yezingxenye eziyinhloko zanoma yiluphi uhambo olubiza usawoti walo. Ngakho-ke, akukho okufana nokubheja ekuhleleni kahle. Sikhohlwa ngokuphelele lelo binzana elithi 'Uma kungenzeka' ngoba ekugcineni sizithola siphethe ipotimende elidlula amakhilo avumelekile. Ngakho-ke, khumbula ukuthi kufanele ugqoke izingubo zikanokusho zosuku nezicathulo ezingasheleli. Kokubili ukuba semkhunjini nokuya ohambweni, yize lapha sizoshintsha isitayela sezicathulo.
Ngezikhathi zakusihlwa, kuliqiniso ukuthi kwesinye isikhathi sizothola isidlo sakusihlwa esingahlelekile ngokwengeziwe. Ngakho-ke ungangeza ingubo nayo. Kuzodingeka nezingubo zemidlalo namasudi okugeza. Yize kufanele uthole ukuthi usunayo yini ebhodini, ungahlala uphatha amathini amancane ngejeli yakho noma nge-shampoo. Kepha yebo, ungalethi isihlakala sezinwele noma insimbi yezinwele noma izingubo zakho. Ngoba kuyinto engavunyelwe kakhulu. Ngakho-ke, gxila kangcono ezingutsheni, izesekeli futhi-ke, isixubho noma iselula ongayikhohlwa. Vele, kufanele ufake kokubili ipasipoti nekhadi lokugoma. Ukulungele ukuhamba ngomkhumbi kulokho okuzoba iholide elihle kakhulu empilweni yakho!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Cruceros » Amathiphu wokuhlela uhambo lokuhamba ngesikebhe